हाम्राे पिपलबाेट » कृषिमा युवाको मोह बढ्दो,विदेशबाट फर्केपछि कागती खेतीमा रमाउदैँ वली कृषिमा युवाको मोह बढ्दो,विदेशबाट फर्केपछि कागती खेतीमा रमाउदैँ वली – हाम्राे पिपलबाेट
कृषिमा युवाको मोह बढ्दो,विदेशबाट फर्केपछि कागती खेतीमा रमाउदैँ वली
अनुदानका कार्यक्रमले सहयोग पु¥याएको छः राप्तीसोनारीका किसान
राप्तीसोनारी गाँउपालिका वडा नं. १ कुशुम बाघखोरका झग्गु प्रसाद वलीले ३ वर्ष विदेशी भूमिमा पसिना बगाए । वैदेशिक रोजगारीका लागि सन् २०१४मा मलेसियाको मलकामा पुगेका थिए । केही वर्ष विदेशमै काम गरेर ६ वर्षअघि स्वदेश फर्किए । विदेश जानुअघिदेखि वलीले डेढ विगाह कागतीका बेर्ना लगाएर गएका थिए । उनी विदेशमा छँदा त्यो काम पत्नीले सम्हाल्दै आइन् । छोरा(छोरी हुर्काउँदै कागतीका बेर्नाहरु स्याहार गरिन् ।
वलीलाई कागती खेतीप्रति रुची जगाउने र मनग्ये आम्दानी हुन्छ भन्ने प्रेरणा दिने राप्तीसोनारी गाँउपालिका वडा नं.१का मेदलाल वलीले दिएका थिए । कागती खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्नेमा झग्गुलालले विश्वास गरेका थिएनन् । तैपनी प्रेरणाको श्रोतका रुपमा रहेका मेदलालले सल्लाह दिएपछी कागती पेशा शुरुवात गरेका थिए । झग्गु प्रसादले विदेशमा गर्नुपरेको परिश्रमका बारेका पूर्ण जानकार छन् । १२ घण्टाको कडा मेहनेत र परिश्रमले आफ्नो खर्च कटाएर महिनाको २०÷३० हजार घरमा पठाउथे ।तैपनी उनी खुसी थिएनन् । घरपरिवार देखी टाढाँ र समाजदेखी टाढा बिनारो मुलुकमा काम गर्नुपर्दाको पीडा थियो । विदेशमा गर्नुपर्ने मेहनेत आफ्नै जन्मभुमीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोच वलीलाई आयो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछी आफुले लगाएका कागतीका बेर्नाहरुलाई संरक्षण गर्दै एक युवा सफल व्यवसायी बन्ने परिकल्पना गरे । २०६९ सालमा कागती खेती शुरुवात गरेका वली अहिले बार्षिक ६ लाख भन्दा बढि आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । राप्तीसोनारी गाँउपालिका वडा नं. १ बाघखोरमा उत्पादन भएका वलीका कागतीहरुको बजार अहिले घोराई, लमही, तुल्सीपुर,काठमाण्डौ, पोखरा र समेत पुग्ने गर्दछ् । वलीले शुरुवात गरेको कागती पेशाबाट उनीमात्र रोजगार नभएर ६ जना युवाहरुलाई रोजगार समेत दिन सफल भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका वलीलाई राप्तीसोनारी गाँउपालिकाले उत्कृष्ट कृषकको रुपमा सम्मान समेत गरिसकेको छ । युवा कृषक वली भन्छन् विदेश भनेको क्षेणिक समयका लागी मात्र हो , दुख गर्नको लागी जाने हो । परिवार संग बसेर पैसा कमाउनका लागि त आफ्नै जन्मभूमीमा थुप्रै अवसरहरु छन् तर मेहनेत गर्नुपर्छ उनको भनाई रहेको छ । वलीको कागती खेतीबाट आकर्षण भएर राप्तीसोनारी गाँउपालिका वडा नं.१ का अन्य कृषकहरु पनी उक्त पेशालाई निरन्तरता दिएका छन् । राप्तीसोनारी गाँउपालिका वडा नं.१का प्रकाश घर्तिले अहिले ६ कठ्ठा जमिन भाडामा लिएर कागती खेती गरेका छन् भने राप्तीसोनारी १ कै इश्वरी वली ,दिलिप केसी पनी कागती खेती गरिरहेका छन् ।
प्रतिकेजी ८० देखी१ सय ३० रुपँया सम्म कागतीको कारोबार हुनेगर्दछ । भारतीय बजार संग स्थानिय स्तरमा उत्पादन भएको कागती खेती प्रतिस्पर्धाका लागि चुनौती समेत रहेको छ । राप्तीसोनारी गाँउपालिकाले समय समयमा कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु वलीले पाएको खुसी सुनाए । वलीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षण गर्नका लागि स्थानिय तहले विभिन्न फरक फरक खालका प्रभावकारी कार्यक्रमहरु वडा स्तरमा ल्याउनुपर्ने उनको बुझाई रहेको छ । आफ्नै जन्मभूमीमा युवाहरुलाई परिश्रम गर्ने बातारण सिर्जना गर्न सकिएमा बेरोजगार भएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने वलीको भनाई रहेको छ ।वलीले पछिल्लो समयमा कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । कागती खेती फार्ममा कुखुरा पालन सहज हुनेभएकाले व्यवसायीक रुपमै कुखुरा पालनलाई पनि विशेष ग्राहयता दिने उनको सोचाई रहेको छ ।
६ चैत्र २०७७ मा प्रकाशित